တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီး အလီ ဘာ ဘာ တြင္ ခ်ာ လီ မန္း ဂါ ၏ ရွယ္ယာ ႏွစ္ဆ နီးပါး ျမင့္တက္ – Pandaily
Jan 06, 2022, 19:25ညနေ 2022/01/08 00:42:05 Pandaily
Warren Buffett ၏ ရင်းနှီး သော စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Charlie Munger ပိုင် သတင်းစာ နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီ Daily Journal Corp. က အမေရိကန် စတော့ ဈေးကွက်တွင် Alibaba ၏ အစုရှယ်ယာ ကိုတိုးမြှင့် လိုက်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ဖော် ခဲ့သည်။
အရDaily Journal Corp မှ တင် ပြချက် 13F ဖိုင်၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စတု တၱ သံုးလ ပတ္ အထိ အေမရိကန္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ ေရး ေကာ္မရွင္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကုန္အထိ Alibaba Group Holding Ltd တြင္ အေမရိကန္ အပ္ ေငြ ရွယ္ယာ ၆၀ ၂, ၀ ၆၀ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး စက္တင္ဘာ လကုန္ ပိုင္း ၌ ၄င္း၏ ရွယ္ယာ ၃၀၂, ၀ ၆၀ ထက္ ႏွစ္ဆ နီးပါး ပိုမ်ား ေနသည္။
Daily Daily မှ အစီရင်ခံစာ ကာလ အဆုံး တွင်ဒေါ်လာ ၂ ၅၈ သန်း တန်ဖိုး ရှိသည့် Daily Daily ၏ အစုရှယ်ယာ များ ကိုပိုင်ဆိုင် ထားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းမှာ Alibaba ၏ရှယ်ယာ ၃၀၀, ၀၀၀ ကိုဝယ်ယူ ရန် ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၆၀ ၂၀၀၀ အထိရှိသည်။
ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် Wells Fargo ၊ Bank of America, Posco နှင့် US Bancorp တို့တွင် အစုရှယ်ယာ များ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ၂၀၂၀ နှစ်ကုန် ပိုင်း မှစ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများမှာ မပြောင်းလဲ ပါ။
Daily Journal Corp သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ Alibaba ၏ရှယ်ယာ များကို ကန ဦး ဝယ်ယူခဲ့သည်။ မတ် လကုန် တွင် ရှယ်ယာ ၁၆၅ ၃၂၀ ကို ပိုင် ဆို င်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၇. ၅ သန်း တန်ဖိုးရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အလီ ဘာ ဘာ သည် ၂၀၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၏ဒုတိယ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ လကုန် အထိ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလီ ဘာ ဘာ ရဲ႕ ဒုတိယ သံုးလ ပတ္ ၀င္ေငြ ဟာ ယြမ္ ၂၀၀ ဒသမ ၆၉ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၄၇ ဘီလ်ံ) ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ ခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ US မဟုတ်သော GS အသားတင် အမြတ် သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၉% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၂၈. ၅ ၂၄ ဘီလီယံ ယွမ် သို့ ကျဆင်းသွားပြီး US အပ်ငွေ ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် US မဟုတ်သော GS မှ ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၃၈% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၁၁. ၂၀ ယွမ် သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ချိန်ညှိ ထားသော EBITDA (US မဟုတ်သော အထွေထွေ စာရင်းကိုင် စံ သတ်မှတ်ချက်များ ဘဏ္ Financial ာရေး ညွှန်းကိန်း) သည် တစ်နှစ်လျှင် ၂၇% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ယွမ် ၃၄. ၈၄ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
လက်ရှိ စီးပွားရေး ဝန်းကျင် နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာ မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အလီ ဘာ ဘာ သည် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ ကိုလည်း လျှော့ချခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၂၀% မှ ၂၃% အကြား တိုးတက် မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး ယခင် ခန့်မှန်း ထားသည့် တိုးတက် မှုနှုန်းသည် ၃၀% နီးပါး ရှိသည်။
ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် အမေရိကန် စတော့ရှယ်ယာ ပိတ် ချိန်တွင် အလီ ဘာ ဘာ ၏ရှယ်ယာ သည် ၁. ၃၆% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၅% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
American Semiconductor Industry Association (SIA) က တနင်္လာနေ့တွင် တရုတ်ပြည်မကြီး ရှိ ကုမ္ပဏီ များ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချစ်ပ် ရောင်းအား သည် တိုးတက် နေသည်ဟု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။